माधव नेपालले एमालेभित्रै रहेर ओलीसँग संघर्ष गर्ने – HTV Khabar
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अब नेकपा एमालेका सांसद भएका छन्। उनी एमालेका वरिष्ठ नेता पनि हुन्।
कानुनी रुपमा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अस्तित्वमा आएपछि नेपाल अप्ठ्यारोमा परेका छन्। उनको साथमा रहेका सांसदहरु पनि अलमलमा परेका छन्।
एमालेभित्र नेपाल अल्पमतमा छन्। उनीसँग पार्टी अलग गर्नका लागि आवश्यक ४० प्रतिशत सांसद संख्या पनि पुग्दैन। त्यसैले उनी एमालेमै बसेर संघर्ष गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। माधव नेपालले तत्काल केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने रणनीतिक कदम चाल्ने बुझिएको छ। उनी अहिले पनि ओलीको बर्हिगमनमा लागेका छन्। सत्ताबाट ओलीलाई हटाएपछि एमालेभित्रै शक्ति वृद्धि हुने नेपाल पक्षकोे बुझाई छ।
अहिले ओलीलाई हटाउन सिधै लाग्दा संसदीय दलको विधान बमोजिम ह्वीप विरुद्ध जाँदा सांसद पद नै गुम्न पुग्छ। त्यो चुनौती पनि नेपालसँग छ। तर, अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा नेपाल पक्षले साथ नदिए ओली स्वतः सरकारबाट हट्न वाध्य हुन्छन्। अब नेपाल पक्षले रणनीतिक चार्तुयता देखाएर ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने निश्चितप्रायः छ।
नेपाल पक्षको सांसद पद खारेज गरेमा पनि ओली कमजोर हुन पुग्छन्। प्रत्यक्ष चुनाव जितेकाहरुको हकमा पुनः अर्को नाम लान सकिने अवस्था छैन। यो अवस्थाका कारण ओलीले तत्काल बाजी मारेपनि अप्ठ्यारोमा छन्। उनलाई सत्ता जोगाउन निकै ठुलो चुनौती छ।
On २४ फाल्गुन २०७७, I १२:४६ By HTV Khabar
Previous Postअनलाइन गायन तथा नृत्य प्रतियोगिताका विजयीलाई प्रमाणपत्र प्रदान….
Next Postविप्लव आज कपिलवस्तुमा
पूर्वडीआइजी रमेश खरेल राजनीतिक दल खोल्दै, को को जाँदैछन् उनको पार्टीमा ?
काठमाडौं, सोमवार २६ असोज नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी रमेश खरेलले अन्ततः राजनितिक पार्टी खोल्ने भएका छन्। नेपाल प्रहरीको डिआईजी पदबाट...
कांग्रेसबाट तोकिए मन्त्री
काठमाडौं, शुक्रवार २२ असोज विवादका विचमा भएपनि नेपाली कांग्रेसबाट चार मन्त्रीको नामवली तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज नै...
गरे माधव नेपालले पार्टी एकता
काठमाडौं, शुक्रवार २२ असोज माधव नेपालले पार्टी एकता गरेका छन्। उनी नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जीवन राई नेतृत्वको नेकपा...